Somalia & Masar oo iskula guulaystey abaalmarin qaali ah oo caalami ah | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia & Masar oo iskula guulaystey abaalmarin qaali ah oo caalami ah
Somalia & Masar oo iskula guulaystey abaalmarin qaali ah oo caalami ah
(Portland, OR) 31 Maajo 2019 – Hal abuurad reer Masar ah, Nadra Mabrouk iyo gabadha Soomaaliyeed ee Jamila Osman ayaa ku wada guulaystey abaal marinta qaaliga ah ee dhanka gabayada ee Brunel International African Poetry Prize.
Nadra, oo reer Qaahira ah waxna ka barata Academy of American Poets iyo Jamila, oo wax qorta macallimadna ka ah Portland, Oregon, ayaa midkiiba heli doonaa abaalmarin dhan £3,000 oo gini.
Ujeedka abaalmarintan oo ah mid lagu doonayo in gabayada Afrika lagu soo saaro masraxyada fanka caalamka, ayaa waxaa loogu tala galay gabayaa kasta oo aan weli daabicin album dhan.
Waxaa dadkii horay ugu guulaystey ka mid ahaa Warsan Shire, oo iyaduna ka socotey Somalia, oo markii dambe Beyoncé kala shaqaysay albumkeeda Lemonade, iyo Nigerian-ka Romeo Oriogun oo haatan wax ka dhiga Harvard University.
Garsoorayaasha Matthew Shenoda, Leila Chatti iyo Phillippa Yaa de Villers ayaa Jamiila ku amaanay hal abuur isku qabanaya khadda qurbaha iyo qarankii ay ka timid ee Somalia, iyagoo sheegay in ay gabayeeda u qortay una midabeeysay si qurux badan oo uu fan iyo farshaxan ka muuqdo.
Previous articleSAWIRRO: Gunners guuldarradii Chelsea waxaa uga dara geni la’aanta suuqa kala iibsiga (Dhibaato la gudboon)
Next articleNin soo Islaamay oo OOYIN la dhacay markii ay hal SALAAD ka tagtay 7 bilood kaddib!!